Umsebenzi womcwaningi mabhuku wawuthanda esemncane
UNKK Ntombifuthi Mhlongo oyinhloko yehhovisi lomcwaningi mabhuku KwaZulu-Natal
LUNGI LANGA | September 5, 2019
INHLOKO yehhovisi lomcwaningi mabhuku KwaZulu-Natal, uNkk Ntombifuthi Mhlongo, ithi yezwa emsakazweni yathatheka ngomsebenzi wokucwaninga amabhuku.
UNkk Mhlongo uthe akakholwa wukuthi ngabe ulapha ekhona ukube akazange azihluphe ngokulalela umsakazo athole ngomsebenzi wokuba yiChartered Accountant, umsebenzi alokhu athatheka yiwo kusuka enza uGrade 8.
“Ngikhulele emakhaya eNdwedwe lapho besingakwazi ukuthola kalula ulwazi, sasithembele kothisha bethu.
“Ekhaya sasinomsakazo engangithola ulwazi kuwo. Ngelinye ilanga ngathi ngilalele ngezwa kukhulunywa ngokuthi kukhona umuntu onesicucu sokuba yiChartered Accountant kuchazwa nokuthi wenzani.”
Uthe ngalezo zikhathi babebancane kakhulu abantu ababenza lo msebenzi futhi naye wayeqala ngqa ukuzwa ngawo.
Ukukhula ekhaya elidonsa kanzima kwamenza wafisa ukuthi abe ngomunye wabantu abayidlanzana abenza lo msebenzi futhi wabona leli kuyithuba lokuthi akhiphe umndeni wakhe ebunzimeni owawubhekene nabo.
Manje usephethe ihhovisi elibalulekile elineqhaza elikhulu ekuqinisekiseni ukuthi iminyango kahulumeni, omasipala nezinye izinhlaka ziyiphatha ngendlela imali nokuthi abantu bayazithola izidingo zabo.
Uthe ngesikhathi esaqala ukuzitshela ukuthi ufuna ukwenza umsebenzi wokucwaninga amabhuku, wayekholwa wukuthi umsebenzi ngowokuthi akhiphe umndeni wakhe naye ebunzimeni benhlupheko kodwa kuthe uma ethola uxhaso lokuqhuba izifundo zakhe ehhovisi lomcwaningi mabhuku, kwayilapho kusa ngokunye kuye ngokubaluleka komsebenzi ayefuna ukuwenza.
“Ngithe uma ngiqala ukusebenza njengesitshudeni ehhovisi lomcwaningi mabhuku kwayilapho ngiqala ukubona ukuthi ubaluleke kangakanani umsebenzi.
“Kwangijika kakhulu ngoba kwangenza ngabona ukuthi ngizowenza umehluko kubantu bakithi ngoba uma sicwaninga amabhuku eminyango noma omasipala sisuke senza konke esingakwenza ukuqinisekisa ukuthi bayisebenzisa ngendlela imali.
“Uma ubuka lo msebenzi esiwenzayo ungaphandle, uyaye uzitshele ukuthi sifana nenkampani yokucwaninga amabhuku kodwa uthi uma usungaphakathi uqale ubone ukuthi umsebenzi esiwenzayo ubucayi kanjani.
“Ngathi uma sengingaphakathi ngabona ukuthi ngeke ngigcine ngokushintsha impilo yabantu basekhaya kodwa ngizoshintsha nempilo yamalungu omphakathi wonkana,” kusho uNkk Mhlongo.
Uthe ngaphambi kokuthi aqale ukufunda nangesikhathi esenentshisekelo yokuba yiChartered Accountant, kwamsiza kakhulu ukwesekwa ngabazali bakhe.
Kwakuvame ukuthi abantu babe ngodokotela noma babe ngothisha namaphoyisa, abazali bakhe bameseka ngesikhathi ekhetha okuhlukile.
UNkk Mhlongo uthe wazisiza ngokuzibophezela ekutheni alwele ukuthi agcine ephumelele ezifundweni zakhe phezu kwezingqinamba ezazikhona njengokungabi nayo imali.
Ubalule ukuthi wake wahlala unyaka engafundi ngoba abazali bakhe bengenayo imali yokumfundisa.
Ngonyaka olandelayo wathola uxhaso oNgoye wase ephinda ethola uxhaso lokuqhuba izifundo zakhe ehhovisi lomcwaningi mabhuku.
Unxuse abantu abasha ukuthi bangawabukeli phansi amaphupho abo nokuthi bazimisele uma sebethola amathuba okufeza amaphupho abo.
'Kusikile kimina, ngavele ngakhala'
Akuzuvalwa isikhathi eside ezikoleni